PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - ISEXWAYISO NGEZIMVULA EZINAMANDLA NGEMPELASONTO
ISEXWAYISO NGEZIMVULA EZINAMANDLA NGEMPELASONTO
Ilanga - 2019-01-10 - Izindaba - PAMELA ZUNGU LANGA [email protected]
BAKHIPHE isexwayiso basibhekisa kwizakhamizi zaKwaZulu-Natal abeSouth African Weather Service (SAWS) mayelana nesimo se-zulu esibi esingase siqale namhlanje ngoLwesine kuze kube yiSonto. Bathi kulesi sifundazwe kulindeleke izimvula ezinamandla, ezihambisana nokuduma kwezulu.
Baxwayisa imiphakathi ngokuthi uma izulu liduma kumele ibhoncule konke okusebenza ngogesi, ingagezi uma lina, ingasebenzisi ucingo uma liduma futhi uma umuntu eshayela kumele amise imoto. Bakusho lokhu bethintwa yi
nge-e-mail emuva kokuba kusinde umndeni wakwaMsezane eMakhonyane, eMkhanyakude, ngesikhathi kuhlasela izikhukhu- la ezihambisana nokuduma kwezulu, zashiya umonakalo omkhulu kule ndawo ngeledlule.
Kulesi sigameko kuthiwa miningi imindeni esale dengwane njengoba kulimale impahla yayo. UMnu Enas Msezane (58), uthi usashaqekile ngokwenzekile ngoba ubengakaze acabange ukuthi into efana nale ingenzeka kwakhe, ubehlala eyibukela kude.
Utshele ILANGA ukuthi basinde ngeNkosi ngesikhathi kuphephuka uphahla, kungena umbani washisa indlu. Kushe yonke into endlini, ngisho izitifiketi zezingane imbala. Kuyimanje imindeni eminingi kayinayo indawo yokufihla amakhanda ngenxa yalo monakalo.
“Sibenenhlanhla yokuthi lokhu kwenzeke ngehora lesi-7 ebusuku singakalali. Ukuba kwenzeke silele ngabe sikhuluma okunye. Endaweni esakhe kuyona kujwayelekile ukuthi izulu lishiye umonakalo uma liduma. Siyabikelwa uma sekusondela ukuhlwa ngoba kasinazo izindawo zokulala ngenxa yalo monakalo,” kusho uMnu Msezane.
Uthi kube wumusa kaNkulunkulu ukuba kungalimali muntu endlini elala abantu abawu-19 kuyona. UMnu Sphelele Mkhwanazi naye olinyalelwe yimpahla, uthi usathukile ngoba uyaqala ukwehlelwa yinto efana nale.
“Singalujabulela usizo oluvela kusamasipala ukuze sizokwazi ukulungisa izindlu zethu ezikhahlanyezwe yizulu. Miningi imindeni elinyalelwe yizindlu ngenxa yalesi sehlakalo,” kusho uMnu Mkhwanazi.
UMnu Bonginkosi Mahaye, oyikhansela lendawo, uthe: “Nginxusa ukuba imiphakathi ihlale iqaphele futhi icishe omakhalekhukwini, ingawathinti amanzi uma liduma ngoba izulu liyahlonishwa.”
Okhulumela uMasipala wesiFunda uMkhanyakude, uMnu Mdu Dlamini, uthe bayile endaweni ukuyobona umonakalo kanti zibalelwa ku-168 izindlu ezikhahlemezekile.
“Umasipala uzokwenza konke okusemandleni ukusiza amalungu omphakathi. Umphakathi unikelelwe ngoblankethi, amatende nokudla, kanti uhlela ukufaka izigxobo zokuphambukisa izulu (lightning conductor) ngoba liyathanda ukudlalela kule ndawo,” kusho uMnu Dlamini.
Ngokwesitatimende esikhishwe wuMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal oholwa nguNkk Nomusa Dube-Ncube, umnyango uthumele ithimba lezenhlekelele ezindaweni ezikhahlamezekile.
“Nginxusa umphakathi ukuba uqaphele njengoba kusalindeleke ezinye izikhukhula kule ndawo. Isikhathi sasehlobo KwaZulu-Natal sishisa, kakhulu okwenza ukuthi izulu ligcine liba nezimvula ezinamandla ezihambisana nokuduma kwezulu.” kusho uNkk DubeNcube
Kunxuswa imindeni ethikamezekile ukuba ixhumane namakhansela ezindawo ukuze izothola usizo ngokushesha.